SmCo nju - China Ningbo enweghị
SmCo nju bụ abụọ emana nke obere ụwa na-adịgide adịgide nju, bụ a elu-ike-adịgide adịgide magnet mere si SM, Co, Fe na ndị ọzọ Chọpụta metal ọcha. E wezụga a max arụ ọrụ okpomọkụ nke 300 ℃, o nwere ịrịba ama ndị na-eguzogide megide corrosion na ọxịdashọn. N'ihi ya, o nwere ike ga-eji na aeronautic na ohere ọrụ aomng ndị ọzọ. Manufactures SmCo5 na Sm2Co17 nju dị iche iche na shapes. Ọtụtụ ndị ahịa na-achọ akara ule YXG28, YXG30, YXG32, SmCo28, SmCo30, SmCo32, wdg machining na tolerances Anyị ...
SmCo nju bụ abụọ emana nke obere ụwa na-adịgide adịgide nju , bụ a elu-ike-adịgide adịgide magnet mere si SM, Co, Fe na ndị ọzọ Chọpụta metal ọcha. E wezụga a max arụ ọrụ okpomọkụ nke 300 ℃, o nwere ịrịba ama ndị na-eguzogide megide corrosion na ọxịdashọn. N'ihi ya, o nwere ike ga-eji na aeronautic na ohere ọrụ aomng ndị ọzọ.
Manufactures SmCo5 na Sm2Co17 nju dị iche iche na shapes. Ọtụtụ ndị ahịa na-achọ akara ule YXG28, YXG30, YXG32, SmCo28, SmCo30, SmCo32, wdg
Anyị nweta akụkụ size na ndidi site ịcha ma ọ bụ egweri na ibu Abrasives. Samarium Cobalt (SmCo) apụghị ground na ot mkpọpu ala, mbịne ma ọ bụ-egwe ọka Filiks, na a ga-machined tupu ha magnetized. Ọzọkwa, nnukwu ma ọ bụ mgbagwoju mgbakọ na-na-magnetized tupu mgbakọ. Standard tolerances maka Samarium Cobalt nju bụ +/-. 005 "maka ala akụkụ. Anyị kọ SmCo nju na ngọngọ, mgbanaka na diski ụdị ke a dịgasị iche iche nke nha na akara ule, anyị na-n'ụzọ zuru ezu kwadebere n'ụzọ na-emepụta na size na ndidi na ị na-achọ.
1: 5 alloy ihe
1: 5 na-enye 16 MGOe (ike ngwaahịa) 22 MGOe na mee nke dị 50% samarium na 50% cobalt. The 1: 5 usoro nwere a kacha na-atụ aro ọrụ okpomọkụ nke 250 ° C. SmCo 1: 5 nju-achọ ala ubi na-eme karịa 2:17 ihe na-magnetize. N'ọnọdụ ụfọdụ, 1:15 ihe nwere ike magnetized na otutu okporo osisi, ọ bụrụhaala na a magnetizing eletrik dị.
2:17 alloy ihe
2:17 awade 24 MGOe 32 MGOe na-emi esịnede banyere 25% samarium, 5% ọla kọpa, 18% ígwè, 2% hafnium ma ọ bụ zirconium, na ndị fọdụrụnụ ịbụ cobalt. The 2:17 usoro nke nwere a kacha ọrụ okpomọkụ nke 350 ° C. Special akara ule nke 2:17 dị nke nwere ike ịrụ ọrụ na ọbụna elu okpomọkụ. SmCo 2:17 na-achọ oké elu magnetizing ubi, na multiple osisi magnetization bụ ekwe omume.
Open na ibudata na ụzụ Data nke SmCo nju
Ndabere Magnetik Property
SmCo nju VS Sintered Neodymium nju
Ndabere Magnetik Property:
Oke-arụ ọrụ okpomọkụ: 250-350 ° C
Oke Energy Product: (Bhmax) (15-35 MGOe)
Oke-arụ ọrụ okpomọkụ: (Temp.Tw) 250-350
itinye n'ọkwa coercive Force: (Hcb) 4-12 (Koe )
mmapụta ndọta: br 0.8-1.2 (T)
reversible okpomọkụ ọnụọgụ nke mmapụta ndọta (br) -0.04 - -0,01
1. Ezigbo Coercity
2. Nice okpomọkụ Kwụsie
3. N'ihi ego uche nke cobalt, ya price bụ ọnụ na mfe agbanwe
Production Usoro nke Samarium Cobalt adịgide Igwe Ọdụdọ:
ntụ ntụ usoro → Ịga → Sintering → Magnetik onwunwe ule → ọnwụ → okokụre ngwaahịa
Samarium cobalt ihe ọtụtụ ndị na-esichara n'okpuru un-magnetized ọnọdụ, na diamond ikwo ihe wheel na mmiri iwu egweri, nke dị mkpa. N'ihi na nke ala mgbanye okpomọkụ, samarium cobalt ga-abụ akọrọ kpamkpam. Dị nnọọ a obere icheku ọkụ ma ọ bụ ọkụ eletrik na mmepụta ike mfe ịkpalite a ọkụ, na oké elu okpomọkụ, nke na-esi ike ịchịkwa.
Main ize ndụ:
Samarium cobalt nju bụ kenkuwa. Biko obiọma chebe gị anya, mkpịsị aka na aru mgbe emeso ha.
Elu arụmọrụ Motors
The ọdịiche dị n'etiti SmCo nju na Sintered NdFeB nju tumadi na-agụnye ndị na-esonụ isi:
1. Magnetik ike
Neodymium adịgide adịgide magnet dị ike karịa SmCo magnet na magnetik ike.
(Bh) Max nke sintered NdFeB bụ ruo 53MGOe, mgbe (bh) Max nke SmCo ihe onwunwe bụ 32MGOe.
SmCo ihe onwunwe bụ ike n'iguzogide demagnetization karịa NdFeb ihe onwunwe.
2. High okpomọkụ eguzogide
NdFeB bụghị elu dị ka SmCo na elu okpomọkụ na-eguzogide. The kacha arụ ọrụ okpomọkụ nke NdFeB bụ 200 ℃ nakwa na nke SmCo bụ ruo 350 ℃.
3. corrosion eguzogide
NdFeB nju na-adịghị otú ahụ ihe ọma n'iguzogide ọxịdashọn na corrosion. N'ozuzu ha nwere na-echebe site plating ma ọ bụ ọbụna agụụ mbukota. Common ụdị mkpuchi na-agụnye zinc, nickel, epoxy na ndị ọzọ. SmCo nju gaghị rusting enweghị plating.
4. Ọdịdị, nhazi na gbakọta
NdFeb na SmCo na-ma na-emebi emebi ihe onwunwe, otú ha nwere ike ghara arụpụtara site nkịtị ọnwụ nhazi.
The n'ozuzu nhazi usoro bụ waya-electrode ọnwụ na diamond wheel ọnwụ. Ya mere, ndị producible shapes ndị a nju na-ejedebeghị. Kwa mgbagwoju anya shapes na-adịghị irè. Dịtụ-ekwu okwu, SmCo ihe onwunwe bụ ihe na-emebi emebi na ndị ọzọ na-adị mfe ịkwụsị. Ya mere, biko ịkpachara anya na-ezukọ na iji SmCo nju.
A afọ ole na ole gara aga, price nke SmCo nju okpukpu abụọ ma ọ bụ ọbụna ihe karịrị nke ahụ nke NdFeB nju.
Na-adịbeghị anya, ego nke NdFeB bilitere ukwuu n'ihi Country si restrictive ihe na obere-uwa Ngwuputa. Ihu ọma, nkịtị NdFeB nju dị ọnụ ala karịa samarium cobalt.
Previous: AlNiCo nju
Osote: Sintered Neodymium nju
ngwa nju oyi Igwe Ọdụdọ
Elu okpomọkụ Igwe Ọdụdọ
Igwe Ọdụdọ Assembly
Rubber Igwe Ọdụdọ